YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, May 25
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/25/20110အကြံပြုခြင်း
Invitation to Aung San Suu Kyi's birthday
We are planning to celebrate Nobel Peace Laureate and Honourary Canadian Citizen Daw Aung San Suu Kyi’s birthday in Toronto on Sunday, June 19th at 6:00 PM at The Hot House Cafe, at the corner of Church and Front Streets.
It will be her first birthday in 16 years asafree person (i.e. not under house arrest). The title of the event is “Toronto to Burma - A Birthday Celebration for Aung San Suu Kyi, and to benefit Children of Burma”. The Benefits will go to the schools for children in Burma.
We are expecting to receiveavideo message from ASSK for this event. June 19th is the her actual birthday.
25 May 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1450K View Download
25 May 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
1819K View Download
25 May 2011 Yeyintnge's Diary
(၂၀၁၁ မေ ၂၄ )
ဒီစကားကအင်အားတစ်စုံတစ်ရာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အင်အားစုတွေရဲ့ လောလောဆယ်အခြေအနေကို အနီးစပ် ဆုံး ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။
အခြေအနေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုလည်း တိတိပပမရောက်သေးသလို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေလည်း ပီပီပြင်ပြင်ပြန်မဖြစ်သေးတဲ့ တိုးလို့တန်းလန်း(ယာယီ)အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် ဆပ်ပြာပူပေါင်းပမာ ပါးလွှလှတဲ့ အဲဒီ ယာယီအခြေအနေဟာ အခြားသောအခြေအနေတစ်ရပ်ဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားရတော့မှာပါ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်သူ့ဘက်ကနေ စတင် ပြောင်းလဲမှာလည်းဆိုတာကို ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။
တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အင်အားစုတွေဘက်ကပြောရရင် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံ”၊“နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) အဖြစ်အသွင်ပြောင်း” ဆိုတာမှာ ဘက်၂ ဘက်စလုံးကနေနစ်နာဆုံးရှုံးရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ကိုအလိုမတူပဲလက်ခံရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရအရှုံးကြီးရှုံးပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)မှာတိုင်းရင်းသားတွေတစ်လျှောက်လုံးတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ “တန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေး” အာမခံချက် လုံးဝမပါရှိပါဘူး။(နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ခွင့်ရပါစေဦး)လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးအဆင့်နေရာကင်းမဲ့သွားရတဲ့အရှုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အရှုံးရဲ့ ပထမဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယဘက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ စစ်ဘက်နဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုကို လုံးဝ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်။ ဘဏ္ဍာရေးပင်စည်အလှဲခံရပါမယ်။ မိမိတည်ရှိမှုနဲ့လုံခြုံမှုဟာ အကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်ခံရမယ့် ဘဝကိုကျ ရောက် သွားမယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘယ်သူက စိတ်ချလက်ချရွေးမှာလဲ။ ဒါက အရှုံးရဲ့ ဒုတိယဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
“ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ” ကလည်းဒီအခြေအနေကို ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူး။ “ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင် ” ထဲကနေပြောင်းလဲသွားအောင် အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက် မှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးက ကျမ်းသစ္စာဆိုထားပြီးသားမဟုတ်လား။
ဒီတော့ဘက်၂ ဘက်စလုံးကနေနစ်နာဆုံးရှုံးရမယ့်လမ်းကြောင်းကို တိုင်းရင်းသားအပစ်အရပ်တွေက ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လက်ခံပြောင်းလဲပါ့မလား။ လက်မခံခဲ့ရင်။ လက်ရှိနေမြဲအတိုင်း “ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ”က ဆက်ပြီးလက်ခံပါ့မလား။ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိလက်ခံမှာလဲ။ ပြည်နယ်တစ်ခု၊နှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ပြည်နယ်အချို့ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ “ကွက်ကြေညာ” ကာ စစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင် မလာနိုင်ဘူးလား။ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ စစ်တပ်က တစ်နိုင်လုံးကိုသော်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဒေသ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို သော်လည်းကောင်း ကွက်ပြီး အာဏာသိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ။
ဒီလိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုခဲ့ရင် (နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ “ဘယ်ခေတ် ဘယ်ကာလမှမရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး” လည်း “ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ”လက်ထက်ကျမှ သူ့ရဲ့ဆပ်ပြာပူပေါင်းဇာတိရုပ် ပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ဖို့ “နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်ကနေလွတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြီးစီးချိန်အထိ”ကာလအတွင်းမှာသတိပြုမိတဲ့အချက်တစ်ခုကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကိုဖြစ်စေ “နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့(BGF)အဖြစ်အသွင်မပြောင်းရင်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်(လုံးဝ)မပြုဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို စာနဲ့ရေးသားထုတ်ပြန်မထားပါဘူး။ဒါပေမယ့်အဲဒီအချက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အခြေခံမူတစ်ရပ်အဖြစ်တိတိကျကျကျင့်သုံး ခဲ့ပါတယ်။ ( KIO/KSPP နဲ့ ဒေါက်တာတူးဂျာတို့ကိစ္စကိုကြည့်ပါ )
ယခင် (နအဖ)စစ်ကောင်စီဝင် ဗိုလ်တင်အေး က ယခုအခါ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အကွက်ချစီမံထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အပစ်ရပ်တွေ/ အပစ်မရပ်သေးတဲ့ အင်အားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။
(ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ BGF ပြောင်းမလဲဆိုတာမျိုးတော့ စကားပြောရနိုင်ပါတယ်)
ကြည့်မြင်ရသလောက်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ဘောင်ထဲမှာ ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
“ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ”က“တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး” ဆိုတာကိုလည်း အခြေခံဥပဒေဘောင်အပြင်က ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ထား ပုံရပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါလို့ပြောတိုင်း“လွှတ်တော်”အတွင်းမှာသာဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဒီအပြောကို အကြံပေးတွေပါးစပ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။ ပူပူနွေးနွေးအကြံပေးတွေက ဗီဂျေးနမ်းဗီးယား (Mr. Vijay Nambir) ကိုပြောလိုက်ပြီး ပါပြီ။
ဒါကြောင့် “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ” တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် “ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ”အနေနဲ့ (လုံးဝ) လက်မခံနိုင်တဲ့ မူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
ဒီလိုပြောရတာကလည်း အချက်အလက်မဲ့သွားပုပ်လေလွင့်ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပူပူနွေးနွေးအကြံပေးတွေ ပြောလိုက် တဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြီးစီးသွားတဲ့ လွှတ်တော်ထဲက ဖြစ်ရပ်တွေကိုသာဓကပြုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)က ဦးဗညာအောင်မိုးရဲ့ “ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရ အားတိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုဟာ “လွှတ်တော်” ထဲတောင် မရောက်လိုက်ရပါ ဘူး။ ဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့်ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာတင်ပဲ ကျဆုံးသွားပါတယ်။
ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအလိုက်ကွက်ပြီးတင်ပြတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ “ဆက်လက်တာဝန်ယူမည့် အစိုးရသစ် အနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးအပြည့်အဝရရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး တံခါးဖွင့်ထားပြီး အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း” ဆိုပြီး“လွှတ်တော်” ထဲမှာအဖြေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်”/ “နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) အဖြစ်အသွင်ပြောင်း” တာပါ လို့ပဲပြောပြော အဲဒီလို လိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘက် ၂ ဘက်ကနေနစ်နာရှုံးရမယ်လို့ ကျနော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်/ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အင်အားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်စဉ်းစားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းရှိနေပြီ၊ လွှတ်တော်လည်းရှိနေပြီ၊ စစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မထင်မြင်ကြစေချင်ပါဘူး။
ပြည်တွင်းစစ်ကို စ တိုက်ကြစဉ်တုန်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းရှိပါတယ်။ ပါလီမန်လွှတ်တော်လည်းရှိပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံလို့ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီစစ်တိုက်ရပါတယ်လို့ အာဏာရအုပ်စိုးသူတွေက ပြောပါလိမ့် မယ်။
NLD ကြေညာချက် အမှတ် ၁၀/ ၀၅/၂၀၁၁
NLD ကြေညာချက် အမှတ် ၁၀ ၀၅၂၀၁၁
ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ နောင်ဘ၀ဆိုတာ မရှိဟု စတင်ဖင် ဟော့ကင်း ပြော
Wednesday, 25 May 2011 04:35 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
ဗြိတိသျှ ရူပဗေဒ ပညာရှင် စတီဖင် ဟော့ကင်း က ‘ကောင်းကင်ဘုံ ဟူသော အယူအဆနဲ့ သေပြီး နောက်ဘ၀ ဆိုတာတွေဟာ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တွေလိုပါပဲ’ ဟု မကြာခင်က ထပ်မံပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဘာသာရေး ခရေဇီများအကြား ပွက်လောညံကုန်သည်။
“ဦးနှောက်ဟာ ကွန်ပျူတာလိုပဲ ကျနော် ယူဆတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်ပိုင်းတွေ ပျက်စီးသွားရင် ရပ်သွားတာပါပဲ။ ပျက်စီးကျိုးပဲ့သွားတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေအတွက် ကောင်းကင်ဘုံတို့ နောင်ဘ၀တို့ မရှိနိုင်ဘူး။ လူတွေအတွက်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အသိဥာဏ် အမှောင်ထဲက ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အတွက် ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ နောင်ဘ၀ကို နတ်သမီးပုံပြင်လို ဖန်တီးထားကြတာ” ဂါဒီယန် သတင်းစာကြီးကို ပြောခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ ရူပဗေဒပညာရှင် ဟော့ကင်းမှာ အသက် ၂၁ အရွယ်တွင် amyotrophic lateral sclerosis ရောဂါ ရရှိပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်မလှုပ်ရှားနိုင် စကားမပြောနိုင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ A.L.S ရောဂါ ရရှိသူ အများစုမှာ ငါးနှစ်အတွင်း သေဆုံးကြသည်။ ယခု ဟော့ကင်းက ၄င်းရောဂါ ဝေဒနာသည်များ အထဲတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း အသက်အရှည်ဆုံးလူ ဖြစ်နေသည်။
သူ့ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂါဒီယန်ကို ပြောရာတွင် “လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၉ နှစ် ကတည်းက မကြာခင် သေတော့မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ကျနော် အသက်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ သေခြင်းကို ကျနော် မကြောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုမြန်မြန်သေမယ်လို့လည်း မထင်သေးဘူး။ ကျနော့်မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်” ဟု အသက် ၆၉ နှစ်ရှိ ဟော့ကင်းက ပြောသည်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဟော့ကင်းက စကြာဝဠာရှိ တွင်းမည်းကြီးများရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိအကြောင်း သင်္ချာဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် အိုင်းစတိုင်းရဲ့ general theory of relativity နဲ့ အိုင်းစတိုင်း လက်မခံခဲ့လို့ အငြင်းပွားနေရတဲ့ quantum mechanics နိယာမတွေကို ဆက်စပ်ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၈ တွင် စကြာဝဠာရဲ့ နယ်နမိတ်တွေကို ရှင်းပြတဲ့ သူ့ရဲ့ ‘အချိ်န်ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်း’ စာအုပ်မှာ အုတ်ရေ ၁၀ သန်းကျော် ရောင်းရပြီး နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ဘတ်ဆဲလာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မနှစ်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ‘The Grand Design’ စာအုပ်တွင်လည်း ဂေါ့ဒ်က စကြာဝဠာကို မဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားပြီး၊ ရူပဗေဒဖြင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
သူ့စာအုပ်သစ် အဖွင့်တွင် “စကြာဝဠာဟာ ဘာမှမရှိတာတွေကနေ သူ့ဘာသာ ဖန်ဆင်းလာတာပဲ။ ဘာမှ မရှိတာကနေ တစုံတရာ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာတာလဲ၊ စကြာဝဠာ ဘာကြောင့် တည်ရှိတာလဲ၊ ကျနော်တို့ ဘာကြောင့် ရှိတာလဲ ဆိုတာတွေကို အလိုအလျောက် ကောက်ခါငင်ကာ ဖြစ်ပေါ်လာမှု (spontaneous creation) ကသာ အကြောင်းခံပဲ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် ငြင်းဆန်မှုအပေါ် ဂေါ့ဒ် ခရေဇီများက မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ယခု မြန်မာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဝါဒီများကလည်း နောင်ဘ၀ မရှိဘူး ပြောတဲ့အတွက် ဟော့ကင်းကို ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိကြီးဟု သတ်မှတ်လာကြသည်။
အောင်လင်းထွဋ် Wednesday, 25 May 2011 14:22
ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ နောင်ဘ၀ဆိုတာ မရှိဟု စတင်ဖင် ဟော့ကင...